Militeriga Nigeria oo guulo sheegtay - BBC Somali - Warar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Mey, 2013, 18:41 GMT 21:41 SGA
Qaar ka mid ah ciidanka Nigeria ee dagaalka kula jira Boko Xaaraam
Afhayeen u hadlay ciidanka militeriga ayaa sheegay in la burburiyay laba xero ciidan iyo in la dilay soddon kooxaha kacdoonka weerarro ay qaadeen dayaarado iyo helikobtaro degaanka Sambisa ee gobolka Borno.
Afhayeenka ayaa sheegay in in dayaarad ciidanka cirka ay lahaayeen uu ku dhacay gantaal lidka dayaaradaha, laakiin ay dib ugu laabatay saldhigeedi.
Wararka looma xaqiijin si madax banaan. Waxaa jiray sheegasho taas la mid ah markii ciidanku weerareen kooxahan isla degaanka bishii Janaayo.
Dadka ayaa lagu soo warramay inay bilaabeen inay ka qaxaan gobollada waqooyiga bari ee dalka Borno, Adamawa iyo Yobe.